Ambodin’Isotry: trano 30 mahery kilan’ny afo, an-jatony traboina | NewsMada
Ambodin’Isotry: trano 30 mahery kilan’ny afo, an-jatony traboina
Nisahotaka tanteraka teny Ambodin’Isotry, noho ny haitrano nitranga teny an-toerana, omaly tolakandro. Trano eo amin’ny 30 mahery no may kila, olona roa no fantatra fa naratra mafy. Mahatratra an-jatony ireo traboina vokatr’izany.
May kila forehitra ny trano hazo miisa 30 mahery eo, trano biriky miisa dimy, teny Ambodin’Isotry, omaly tokony ho tamin’ny 2 ora tolakandro. Olona roa no fantatra fa naratra mafy, lehilahy sy vehivavy. Manodidina ny 100 eo kosa ny tra-boina noho ity firehetana ity. Antapitrisany ny tentim-bidin’ny zavatra simba teny an-toerana. Voalazan’ireo mponina fa nisy fanaka vao novidiana talohan’ny krismasy may kila.
Ankoatra izany, nisy ihany koa ireo mpanararaotra nangalatra ny entan’ny olona mba hany tafavoaka. Tonga teny an-toerana ny polisy nanao ny asany niaro izay tsy lasan’ny mpangalatra. Samy niezaka namono afo sy nanavotra izay zakany, kanefa ny sasany manararaotra mandroba.
Tonga teny an-toerana ihany koa ny mpamonjy voina izay sahirana tamin’ny famonoana ny afo noho ny fahateren’ny lalana, ny fitangoronan’ny olona. Nandritra ny adiny roa mahery vao maty ny afo tamin’izany. Nilaza ny lehiben’ny mpamonjy voina tonga teny an-toerana fa tery ny lalana, lavitra ihany koa ny fakana ny rano ka nampanano sarotra ny asa famonoana afo. Kamiaobe telo indray nampiasaina teny an-toerana tamin’izany.
Andanin’izany ihany koa ny tsenabe eny Ambodin’Isotry. Tapaka ary nitohana nandritra ny ora maro ny fifamoivoizana teny an-toerana. Voatery niova lalana ny taxi-be sy ny fiara rehetra mampiasa iny lalan’Ambodin’Isotry iny. Naharitra ora roa mihitsy vao tafavoaka teny an-toerana ny fiara tafiditra teny nandritra ity firehetana ity.
Niainga amin’ny trano hazo
Voalaza fa niainga tamin’ny trano hazo iray ny afo. Tsy nisy olona tao amin’izy io, kanefa vetivety niaingan’ny afo ary nitarika tamin’ny teo akaikiny. Voalaza fa nisy nitahiry solika ihany koa ny trano sasany ka nipoaka izany ary nampiitatra vetivety ny afo.
Anisan’ny fotoana isehoan’ny haintrano, indrindra amin’ny faritra iva. Mafana ny andro sady maina ka mety ampirehitra afo tampoka. Eo koa anefa ny mihevitra fa rehefa mafana ny resaka politika, mitranga ny haintrano eto amintsika. Misy izany ny milaza fa mety iniana atao ireny haintrano ireny. Ny fanadihadiana ataon’ny mpitandro filaminana anefa no afaka manamarina izany.